रोट्टयाक्ट क्लवले पब्जी खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै - सगरमाथा साप्ताहिक
पब्जी प्रतियोगिता मार्फत समाज सेवा गर्दै रोट्टयाक्ट क्लव
डिल्लीबजारमा रहेको रोटृयाक्ट क्लवले राष्ट्रिय स्तरको पब्जी खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । निकै नै र्चचामा रहेको पब्जी खेलको माध्यमवाट सामाजिक अभियानमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो । विशुद्ध सामाजिक सेवामा लम्किरहेको यो क्लवले राष्ट्रिय स्तरको यस खेल प्रतियोगिता गर्नुको प्रमुख उद्देश्य आमा नेपाल, बाल गृह, नार्गाजुनमा रहेको अनाथ गृहमा वसोवास गरिरहेका बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्न क्लवले संचालन गरिरहेको ग्रिन स्कलरसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।
यस कार्यक्रमवाट संकलित रकम उक्त अनाथ गृहमा बसोवास र अध्ययन गरिरहेका बालवालिकाहरु को शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्ने लक्ष्य यस क्लवले राखेको छ । साथै नेपालका पब्जी पे्रमी युवाहरुलाई एउटै सतहमा ल्याएर विश्व स्तरीय खेलाडी उत्पादनमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । युवा वर्गलाई मध्यनजर गर्दै गरिने यस प्रतियोगिता माघ २४ गतेवाट शुरु हुने भई माघ २७ गतेसम्म चल्नेछ । खेलको समय राती ८ वजेदेखि रातको ११ वजेसम्म रहेको छ । खेलको भ्यालेनटाइन डे स्पेशल नाम दिइएको र यस खेलमा लक्की ड्र मार्फत एक जोडीलाई भ्यालेनटाइन स्पेशल डेट प्रदान गरिने कार्यक्रमका संयोजक निश्चल पुरीले जानकारी दिएका छन् । उक्त जोडीले प्रणय दिवसको दिन घुमफिर तथा प्रेम साटासाट गर्न पाउने पुरीले जानकारी दिए ।
यस कार्यक्रमा भाग लिन क्लवले उपलब्ध गराएको गुगल फम भर्नु पर्ने छ । भने प्रतिव्यक्ति रु. ५० दर्ता शुल्क लाग्नेछ । दर्ता शुल्क खल्ती एपस वाट भुत्तान गर्ने सकिने छ । भने २ जनाले रु.१०० र ४ जनाको समुहले एकै पटकमा रु.२०० तिरेर आफ्नो समुह दर्ता गर्न सकिने छ ।
यस प्रतियोगिताको विजेतालााई नगद रु. ५०,००० र के.एफ.सी मा रात्रीकालिन भोज (चिकेन विनर) प्रदान गरिने छ । भने उपविजेताले नगद रु.१०,००० र अन्य उपहार प्राप्त गर्नेछन् । साथै उष्कृट ३ सर्बोत्तम मार्नेहरु हाएस्ट किल्सहरुलाई के.एफ.सी को रोयल पास प्रदान गरिने छ । यति मात्र नभई ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले गिफ्ट ह्यामप्रेस प्राप्त गर्नछन् । अन्य थुप्रै उपहार तथा पुरस्कारहरु घोषणा हुने क्रममा रहेको संयोजक पुरीले बताएका छन् । साथ साथै उत्कृष्ट खेलाडीहरुले विभिन्न विधामा पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नछन् । कार्यक्रम एक औपचारिक समारोह वीच गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
यस पब्जी ट्रनामेन्ट लाई खल्ती व्रिज वाटर , बि एण्ड बी फेट्र लगायतले प्रायोजन र सहकार्य गरेका छन् । यस खेलका सम्पूर्ण नियम तथा खेलाइने प्रक्रियाहरु रोटृयाक्ट क्लब अफ डिल्लीवजारले फेसबुक पेज , नेसनल पब्जी ट्रनामेन्ट फेसबुक ग्रुप मार्फत गरिएको छ । यस महान् सामाजिक कार्यका लागि गरिएको यस प्रतियोगितामा सवै युवा वर्गले सहयोग गर्न विश्वास यस क्लवले राखेका छ ।